हलिउड एन बलिउड - PAMPEREDPEOPLENY.COM मा देखी जस्तै सेलिब्रिटीहरू - INSYNC
हलिउड एन बलिउडमा एकरूप सेलिब्रिटीहरू हेर्नुहोस्
घर Insync जीवन Life oi-Denise द्वारा डेनिस ब्याप्टिस्ट | प्रकाशित: मंगलवार, जुलाई २, २०१ 2013, २०::01० [IST]
विश्वमा करीव २ वटा भन्दा बढी अरब व्यक्तिको साथ, यो भनिन्छ कि तपाईसँग सात देखिने जस्तै मानिसहरु हुनु पर्छ। जहाँसम्म, त्यहाँ कुनै समान सुविधाहरू हुनेछैन, तर द्रुत हेराईमा तपाईं समानता देख्नुहुनेछ। यदि तपाईंले आफ्नो रूप एकैसाथ देख्नु भएको छ भने, तपाईं उत्साहित भएको हुनुपर्दछ।
के तपाईं यस्तो अवस्था कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईं र तपाईंको जस्तो देखी एक समान कार्य स्टेशनमा हुनुहुन्छ। व्यक्तिहरूको लगातार गलत गलतफहमी किनभने यो तपाईं हो जब यो धेरै कष्टप्रद हुन सक्छ। त्यस्तै हलिवुडमा थुप्रै सेलिब्रेटीहरू छन् जसले हाम्रो बलिउड सेलिब्रेटीहरूसँग अद्भुत समानता राख्दछन्। त्यहाँ मुठीभर हलिउड सेलिब्रेटीहरू छन् जसको उहि उद्योगमा समान सुविधाहरू छन्।
अक्षय तृतीयामा गर्न को लागी
मैले धेरै व्यक्तिको बारम्बार भनेको सुनें कि यो एक जस्तै देखिन सम्भव छैन। यसको वास्तविक अर्थ के हो भन्ने गलत धारणा लिनु हुँदैन। एकरूप देखिनु भनेको यसको मतलब यो होइन कि तपाई र अर्को व्यक्तिको उस्तै विचार र व्यक्तित्व छ, यसको मतलब यो हो कि तपाईसँग केवल त्यस्तै सुविधा छ। यो समान सुविधा या त तपाईंको आँखाको आकार, तपाईंको ओठको घुमाव वा तपाईंको अनुहार काटिएको हुन सक्छ।
हलिवुड र बलिउड सेलिब्रेटीहरूमा एक नजर हेर्नुहोस् जो एक जस्तै देखिन्छन्
ईशा गुप्ता र एन्जेलिना जोली
यी दुई सुन्दरहरूसँग प्रायः उस्तै ओठको ओठ हुन्छ। यी दुबै सेलिब्रेटीहरूसँग स्वेच्छाले पाउहरू छन्। दुबै अभिनेत्रीहरू पनि लगभग सबै समयमा एकै प्रकारको कपालको खेल खेल्दछन्।
ब्रैडली कूपर र रितिक रोशन
शिकारीहरू प्रत्येक सम्भाव्य तरिकामा एक अर्कासँग मिल्दछन्। दुबै जस्तो देखिने सेलिब्रेटीहरूले एउटै मुस्कान साझा गर्छन र उही रंगीन आँखाहरू पनि छन्।
जोन अब्राहम र एन्टोनियो बान्डेरास
एक पटक जब यी दुबै अभिनेताहरू एक जस्तै देखिन्थे जब उनीहरूको लामो कपाल थियो। जोन अब्राहम र बन्देरास एकै देखिन्छन्, तपाईलाई यो लाग्दैन?
फिलिप रिस र तुषार कपूर
दुई अभिनेताहरूको यो अलौकिक समानताले जो कोहीलाई लाग्छ कि उनीहरू जुम्ल्याहा हुन्।
जेफ्री डीन र जेभियर बर्डेम
स्पेनिश अभिनेता जेभियर बर्डेम र जेफ्री डीन यति धेरै साझा। दुई कलाकारहरु मा हेर्दै, तपाईं कुनै भिन्नता पाउनुहुनेछ।
भिक्टोरिया जस्टिस र नीना डोब्रेभ
भम्पायर डायरी अभिनेत्री नीना डोब्रेभसँग डोपेलगर छ। उनी अरु कोही होइन भिक्टोरिया जस्टिस।
बेनिसियो डेल र ब्राड पिट
बेनिसियो डेल हामीलाई ब्राड पिटको सम्झना दिलाउँछ जब ऊ ठूलो हुन्छ।
एम्मा स्टोन र मेलिंडा क्लार्क
सुन्दर अभिनेत्री मेलिंडा क्लार्कको अब जुम्ल्याहा दिदी एम्मा स्टोन छ। के तपाईं सहमत हुनुहुन्न कि दुबै सेलिब्रेटीहरू एक जस्तो देखिन्छन्?
Zooey Deschanel र क्याटी पेरी
क्याटी पेरीको फ्यानहरूको नयाँ सूचीले Zooey Deschanel लाई अमेरिकी पप गायक हुन पनि गल्ती गर्दछ। ठिक छ, हामी कसैलाई दोष दिन सक्दैनौं, हामी गर्न सक्छौं?
Kesha र ब्लेक जीवन्त
अमेरिकी गीतकार र रपर, केसाको ब्लेक लाइभलीको साथ अनुहार संरचना छ। हामी कहिलेकाँही उनीहरूलाई चिन्न असफल हुन्छौं।
कोको रोचा र एशले ग्रीन
ट्वाइलाइट स्टार, एशले ग्रिनको पनि हलिउडमा एकै खालको सेलिब्रिटी छ। सेलिब्रेटी अन्य कोही होइन, क्यानाडाली फेशन मोडल।
केइरा नाइटली र नेटली पोर्टम्यान
बेलायती अभिनेत्री केरा नाइटली र नेटाली पोर्टम्यानले पनि सेलिब्रेटीहरूको सूचीमा एक समान देखिन्छन्। तिनीहरूको समान हेयरस्टाईल र मुस्कानले तिनीहरूलाई पैतृक जुम्ल्याहा जस्तो देखिन बनाउँदछ।
churma laoooo नुस्खा कदम कदम
दाहिने आँखाले महिलाको लागि आध्यात्मिक अर्थ मिल्छ
भारत गणतन्त्र दिन अंग्रेजीमा उद्धरण
कसरी सिजेरियन वितरण पछि पेट कम गर्न
तातो पानी मा मह को लाभ